» नायिका स्वेता खड्का,बारे नराम्रो बोल्दा सुस्मा कार्कीले भेटिन् रामधुलाइ, धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पुगिन ! आखिर कस्ले कुट्यो त ? हेर्नुहोस नायिका स्वेता खड्का,बारे नराम्रो बोल्दा सुस्मा कार्कीले भेटिन् रामधुलाइ, धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पुगिन ! आखिर कस्ले कुट्यो त ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
नायिका स्वेता खड्का,बारे नराम्रो बोल्दा सुस्मा कार्कीले भेटिन् रामधुलाइ, धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पुगिन ! आखिर कस्ले कुट्यो त ? हेर्नुहोस
2021, February 2nd, Tuesday
admin 655 Views
नायिका सुष्मा कार्की आफ्ना अभिब्यक्तिका कारण चर्चित छन् । उनले खेलेका फिल्म र गरेका आइटम डान्स भन्दा उनले बोलेका कुराले उनलाई चर्चामा ल्याइ रहन्छन् । तर चर्चा सधैं सकारात्मक हुन्छ भन्ने छैन । उनले अरुको आलोचना गर्दा उनको पनि आलोचना हुने गर्छ ।
पछिल्लो समय यस्तै भएको छ । उनले धुलाई भेटेकी छिन् । यो कुराको पुष्टी पनि नायिका आफैंले गरेकी हुन् । नायिका सुष्मा कार्कीेमाथि काठमाण्डौको लण्डन पब क्याफेमा यस्तो घटना भएको थियो । नायिका स्वेता खड्काकी बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीले यस्तो गरेकोआरोप कार्कीको छ ।
प्रहरी परिसरबाट बाहिरिंदै गर्दा सुष्मा कार्कीले भनिन्, “म र उत्सव रसाईली बीच केही कुरामा विवाद भएको थियो जुन सामान्य नै हो तर उत्सवले मलाई केटाहरु ल्याएर कु’टा’उ’छु देखि उक्त पबबाट निकाल्नु भन्दै ध’म्का’उ’न थाले । त्यस पश्चात स्वेता खड्काले समेत मलाई मुख छा’डेकी छिन र स्वेताको बहिनी आरती खड्काले भने मलाई हा’त हा’लेकी छिन् ।”
“सुष्माका अनुसार अरु जे भएपनि ‘हा’त हा’ल्नुहु’दैन थियो त्यसैले आफू प्रहरीमा उजुरी दिन आएकी हुन् । सुष्माका अनुसार घटनाको सबै भिडियो आफूसंग रहेको र प्रहरीलाई बुझाएको समेत बताएकी छिन् ।
“नायिका सुष्मा कार्कीले घटनाको भिडियो रेकर्ड समेत भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘मसँग सबै भिडियो रेकर्डहरु छ । अब, जे बोल्छ भिडियोले नै बोल्छ ।’ नायिका स्वेता खड्काले आफूलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको सुष्माले दाबी गरेकी छिन् ।
“सो समयमा उत्सव, आरतीको साथमा नायिका स्वेता खड्का र उनका पति विजयेन्द्र सिंह राउत क्लबमा भएको उनको दावी छ । उनी घटना सुनाउन प्रहरीकहाँ पुगेकी छिन्।
यो पनि पढ्नुहोस…
केहि गरेन भन्नेहरुलाई, यस्तो विश्वसनीय काम गरेर देखाउदै : अर्थमन्त्री, के गर्न लागे त ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य तीव्र बनाउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
“स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।” आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिँदै १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताए ।
आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ असारसम्ममा सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिनेछ ।